Mahatsiaro ny rivodoza Gilbert i Jamaika, fa vonona hiatrika an’i Dorian ve ilay nosy? · Global Voices teny Malagasy
"Tsy mahatsiaro ny hatanjaka sy ny faharavana naterak'ilay rivodoza ny ankamaroany"
Voadika ny 01 Oktobra 2019 7:20 GMT
Lt.j.g. Eli Maurer, manamboninahitra ambony ao amin'ny Guard Cutter Winslow Griesser, manatrika ireo fanampiana ao McLeans Town Cay, Nosy Great Bahama tamin'ny 9 Sept 2019. Manohana ny Sampan-draharaham-Pitantanana ny Vonjy Voinam-pirenena Bahamiana sy ny Tafi-Piarovam-Panjaka Bahamiana, izay mitarika ny ezaka fitadiavana sy fanavotana ho setrin'ny rivodoza Dorian ny Mpiambina Morontsirak'i Etazonia saripikan'i Seaman Mikaela McGee, CC BY-NC-ND 2.0.
Tamin'ny 12 septambra 1988, tao anatin'ny fotoan-drivodoza tao Atlantika indrindra, nisy tadio iray nantsoina hoe Gilbert nampifoha tokoa an'i Jamaika tsy niomana hiatrika izany. Tao anatin'ny valo ora no nandalovan'ny masony avy any atsinanana ka hatrany amin'ny tanjona farany andrefana.
31 taona izay no nandravan'ity rivodoza manana sokajy fahatelo ity ny faritra maro ao Jamaika; mahatsiahy ireo efa zokinjokiny, fa manao famakafakana kosa ny hafa raha afa-mijoro amin'ny tadio mafimafy kokoa ny nosy amin'izao fotoana izao.
Tamin'izao ora izao tamin'ny taona 1988 raha nandamaka ny paroasin'i Portland ny tadio Gilbert. Mbola tsy mahafantatra ihany ny Jamaikana maro — ary mbola tsy mahatsiaro ny hatanjaka sy ny faharavana naterak'ilay rivodoza ny ankamaroany.
Nizara tao amin'ny Facebook ny mpandraharaha Wayne Chen:
Rivotra manana hatrany ny hafainganam-pandeha 125 mph ny tadio Gilbert manana maso mirefy 24 km ny savaivony namely an'i Jamaika […] nanavatsava ny lavan'ny nosy ary namela antontam-paharavàna. Niteraka fiakaran'ny rano mirefy 5 metatra sy rotsak'orana 80 santimetatra, izay niteraka tondra-drano vetivety. Olona 49 no maty ary 700 tapitrisa dôlara amerikana no nozakaina. Trano mihoatra ny iray hetsy no potika ary lavo tanteraka ny vokatra akondron'ny firenena. Arabe sy lalambe an-jatony kilaometatra no potipotika ary tapaka ny famatsiana herinaratra. Mitolona mady ny firenena hiverina amin'ny laoniny, saingy saika toy ny mandeha amin'ny sakeli-dalana ambolana vitsivitsy i Jamaika.
Niova ny fotoana, na izany aza, tao anatin'ny telopolo taona, lasa mihatsikaritra hatrany ireo fikorontanan-toetrandro henjana dia henjana. Ao amin'ny sokajy fahadimy mandravarava tsy misy toy izany ilay Tadio Dorian ary nitampikitra tao Bahamas tamin'ny 1-3 Septambra 2019. Tombanana ho eo amin'ny 1300 ny isan'ny mbola nanjavona satria tena voa mafy aoka izany ny ankamaroan'ny faritra ao amin'ny nosy ary sarotra ny fahatongavana tany amin'ireny toerana ireny herinandro iray taty aoriana.
Raha tsaraina avy amin'ny setriny tao amin'ny Twitter, mety ho marefo dia marefo tahaka izany ihany koa i Jamaika:
Mbola maro ihany ireo vondrom-piarahamonina marefo, indrindra fa ireo monina amin'ny trano tsizarizary. Ankoatra izany dia tsy niomana isika amin'ny toerana mampanahy ny rano, ny fahadiovana ary ny fikorianan-drano. Mila ampidirina ao amin'ny tetipanorona maharitra ho an'ireo marefo ny fanamafisana ny tsy ihontsahan'ny tany .
Nasongadin'ny fandalovan'i Dorian ihany koa ny tsy fitoviana ao amin'ireo nosy — tena ratsy dia ratsy lavitra ny faharavana ao amin'ny faritra iray antsoina hoe The Mudd, ohatra, izay itoeran'ny Haisiana mpialokaloka maro, raha oharina amin'ireo Bahamiana sy vahiny hafa manankarena. Zava-pitranga izany aorian'ny rivodoza hoy ny mpampianatra ambony karaibeana iray:
Tokony hahatakatra mihitsy isika fa ny vondrom-piarahamonina marefo na lasa anjorom-bala indrindra mialoha ny voina hitranga (ireo mahantra sy mpiasa, olona manana fahasembanana sy farary, zokiolona ary ireo mikarakara ny hafa) no ho tratran'ny tsy fisiana indrindra aorian'ny toe-javatra. Izany ny fomba fiasan'ny voina. Tsy ilay mpandamina na mpampitovy ry zareo. Ny hany ataony dia ny manapongatra sy ny mampivandravandra ny hantsana sy ny faharefoana. Efa nahita izany hatrany hatrany isika hatramin'ny rivodoza Katrina tao New Orleans ka hatramin'ny tadiohenjana Sandy tany Avaratra atsinanan'i Etazonia, ary tahaka izany ihany koa ny setriny sy ny vonjy voina tsy mety mahomby ho an'i Pôrtô Rico taorian'ny fandalovan'ny rivodoza Maria. Ny marefo indrindra no mbola lasa marefo kokoa
Mbola ambonin'izany, nisy nitatitra amin'izao fotoana izao fa misy fiparitahan-tsolika nateraky ny tafio-drivotra any amin'ny 80 kilaometatra any an-dranomasina sy manamorona ny Grand Bahama, mandrahona ny tontolon-dranomasina. Tena manahy dia manahy ny fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana na fotoana fohy na fotoana maharitra, izay tsy isalasalana fa miantraika amin'ny fiainan'ny nosy miankina amin'ny fizahantany. Efa samy nanomboka fanangonam-bola ireo fikambanana roa ireo, saingy nitombo ireo fanahiana ireo rehefa nanatona an'i Bahamas ny tafiodrivotra an-tany mafana Humberto ny takarivan'ny 13 Septambra.
Ka manao ahoana ary i Jamaika ao anatin'izao toe-javatra mampihoron-koditra izao? Araka ny tati-baovao, izao tontolo izao amin'ny ankapobeny no “tena” tsy niomana amin'ny fiantraikan'ny fikorontanan'ny toetrandro. Ka aiza ho aiza tokoa moa izany no mahatonga ireo nosy kely ho marefo?
Mahatonga tondra-drano vetivety ny fiavian'ny oram-batravatra mitondra rivotra na dia vetivety aza tao anatin'ny tapabolana, ka mitondra atsanga manerana ny araben'i Kingston, mibahana ny fivoahan-dranon'ny renivohitra. Tondraka hatrany ny faritra iva, na andrenivohitra na ambanivohitra rehefa amin'ny toetrandro toa izao — nizara lahatsary ny mponina iray ao Kingston:
Manabe olana ihany koa ny fahazarana tsy tompon'andraikitra tahaka ny fanariana ny fako eny rehetra eny:
Mandeha ny asam-panadiovana tatatra manavatsava an'i MGD, akaikin'ny Chesterfield Dr. Mahamarika tavoahangy plastika maro dia maro anaty tatatra. Anisan'ny fako akarina anaty kamiao ihany koa ny sombintsombim-piara. Ireny no karazan-javatra manimba ny tambajotram-pikorianan-drano.
Na izany aza, manaiky tsy sazoka ireo mpitarika ara-politika fa efa “tranainy dia tranainy” ny fotodrafitrasan'i Jamaika ary mila ampitoboina avy roa heny; ny zavamisy, vao nanambara ny kinasa hanavao sy hanolo ny rafi-pikorianan-drano manerana ny firenena ny Praiminisitra Andrew Holness.
Nihoatra ny telopolo taona izao, eo ho eo ihany ireo tafiodrivotra miserana an'i Karaiba. Tamin'ny Septambra 2017, angamba fampitandremana mialoha fa lasa mihamahery vaika kokoa itony karazan-javatra itony amin'ny fahitana ny fiantraikan'ny rivodoza Irma sy Maria amin'ireo nosy maromaro ao atsinanan'i Karaiba sy Puerto Rico.
Izay ve ny “nôrmaly vaovao” ho an'i Karaiba? Raha izany dia efa tsy fotoana andaniana resaka intsony izao ary mihavay an-dohan-draharaha ny toe-javatra.